दु:खद खबर, बिष्णु माझिका आमाबुबाकै नि'धन ! यस्तो छ मृ'त्युको कारण: सेयर गर्न नछुटाउनुहोला। - खबरदार न्युज
दु:खद खबर, बिष्णु माझिका आमाबुबाकै नि’धन ! यस्तो छ मृ’त्युको कारण: सेयर गर्न नछुटाउनुहोला।
१० दिनलाई भनेर सुन्दरले विष्णुलाई लगे, भिडियो सहित, नेपाली लोक गीतको क्षेत्रमा निकै नै परिचित नाम हो विष्णु माझी ।
उनी स्याङ्झा जिल्लामा स्थित एक गरिब परीवारमा जन्मेकी हुन् र सानै देखि गाउँमा विभिन्न मेला पर्वहरूमा गीत गाउँदै आइरहेकी थिइन् । उनले गायका लोक गीत हीट नभएका सायदै होलान् । उनले पाँच कक्षासम्म मात्रै अध्ययन गरेकी छिन् ।
बिष्णु माझि को स्वरलाई अहिले धेरै ले नै मन पराएका छन् । उनको गीतहरु पनि धेरै नै हिट भएका छन् । सानै उमेर देखि गीत मा रुचि भएकी बिष्णु घरको काम गर्दा पनि गीत गुनगुनाउने गर्थिन ।
पछिल्लो समयमा बिष्णु माझिका गीतहरु हिट हुने भएको हुनाले उनलाई बाहिर ल्याउनुपछ भनि आमा जनताले गुनासो गरेका छन् । बिष्णु माझिको बारेमा उनको माइतीमा के रहेछ त खास कुरा किन उनलाई बाहिर ल्याइएको छैन भनि बुज्न जादा उनका बुबाआमाको मृ’त्यु भईसकेको रहेछ ।
सामाजिक संजालमा बिष्णु माझिको आमा बुबा मिडियामा भनि भिडियोहरु पनि आएको देख्न सकिन्छ पछि उनी लोक गायक तथा संगीतकार सुन्दरमणी अधिकारीसँग बिहे गरिन् । प्रतेयक तीजमा बिष्णु माझीका गीतआउने बेला मा उनका पुराना दोहोरि गीत हरु पनि भाइरल हुने गर्दछन् । आजभन्दा करिब चार बर्ष पहिले बिष्णु माझीले दोहोरीमा गाएको गीत युबट्युबमा राखिएको थियो ।
जबजब विष्णु माझीका गीतहरू हीट हुन्छन् तबतब उनको खोजी तथा चर्चा निकै नै हुने गर्दछ । विष्णु माझीले गाउन थालेको पनि निकै वर्ष भैसक्यो तर उनी कस्ती छिन्,कहाँ बस्छिन् ? आजसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन । धेरैले विष्णु माझीको बारेमा कुराकानी तथा टिकाटि प्पणी गर्छन् तर उनी अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा मिडिया तथा अन्य कुनै पनि कार्यक्रममा देखा परेकी छैनन् । उनको सम्पूर्ण गीत सम्बन्धि कन्ट्र्याक्ट ,पेमेन्ट डिल लगायत सम्पूर्ण काम उनका श्रीमान सुन्दर मणीले नै गर्दै आएका छन् । त्यी नै विष्णु माझीलाई बाहिर ल्याइयोस् उनलाई न्याय होस् भनेर धेरैजना मानिसहरूले अहिले उनको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् ।
सोही क्रममा आज सुनमान्छे भनेर चिनिए का कलाकार तथा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन का अभियन्ता सुवास घिसिङले सुन्दर मणीले विष्णु माझीलाई यसरी बन्धक बनाउन नमिल्ने र उनलाई तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नुपर्ने नत्र उनको न्यायको लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
यो समाचारलाई अत्याधिक मात्रामा शेयर गरि सम्पूर्ण नेपाली माझ पुर्याइदिनु होला बाकि तल भिडियो राखिएको छ हेर्नुहोला । भिडियो हेर्नुहोस।
InBishnu majhi, Bishnu majhi news
Previous post धनगढीमा स्यानिटाइजर पिउँदा केे भयाे ?
Next post एमालेको अभिलेखबाट माधव नेपालको नाम हटाइने
Previous post:धनगढीमा स्यानिटाइजर पिउँदा केे भयाे ?
Next post:एमालेको अभिलेखबाट माधव नेपालको नाम हटाइने